सुनीता साखकर्मी - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन २४, २०७५
एसएलसीपछि नर्सिङ पढ्ने लक्ष्यसहित सर्लाहीबाट काठमाडौं आएकी थिइन् उनी  । परीक्षा दिइन् तर नाम निस्किएन  ।
चिठी आएन, कविता आइन्
सोल्टी क्राउन प्लाजाको दोस्रो तल्ला । बिहीबार मध्याह्नको एक बज्दै थियो । बुधबार मात्रै नेपाल आएकी भारतीय प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति सोल्टीमै छिन् । दोस्रो तल्लाको सानो लिभिङ एरियामा बिहानैदेखि विभिन्न मिडियाका लागि एक्लै अन्तर्वार्ता दिनमै व्यस्त थिइन् उनी ।
धनी–गरिब खाडल पुर्न- नग्न कला
कोही धनी छ वा गरिब, छुट्ट×्याउने पहिलो आधार प्रायः व्यक्तिविशेषको पहिरन हुने गर्छ । तर, पहिरनबेगरको व्यक्तिको त्यस्तो ‘हैसियत’ कसरी थाहा पाउने ?
३२ भाषाका ३६ कविता वाचन
अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसर पारेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मङ्गलवार 'राष्ट्रिय मातृभाषा कविता महोत्सव' आयोजना गरेको छ । महोत्सवमा ३२ भाषाका ३६ वटा कविता वाचन गरिएको छ ।
ठूलो फ्रेमभित्र सानो पौभा चित्र । आकार एक वर्ग सेन्टिमिटर मात्रै । टाढाबाट आँखाले यो पौभा चित्रमा आकृति ठम्याउन सकिँदैन । नजिकै गएर नियाल्दा सुन्दर मण्डला देखिन्छ । चित्रकार उजय बज्राचार्यले कोरेको यो मिनिएचर चित्रमा गरगहनाका बुट्टा मात्रै छैनन्, अक्षर पनि छन् । काठमाडौं उपत्यकामा हिन्दु तथा बौद्ध दर्शनमा आधारित विषयवस्तुलाई नेवार समुदायले कपडामा विभिन्न रङ मिश्रण गरी पौभा चित्र निर्माण गर्छन् । पौभा चित्र बनाउँदा कलाकारले निश्चित नियम पालन गर्नुपर्छ । मनगढन्ते चित्र कोर्न पाउने छुट हुन्न ।
सुनीता साखकर्मीका लेखहरु :
कान्तिपुर कन्क्लेभ–‘लैंगिक समानता पुरुषकै लागि’
नेपाली समाजमा महिलालाई लक्ष्मी, दुर्गालगायत देवीका अवतारसँग जोडेर सम्मान दिने गरिन्छ । आस्थाकै भरमा मन्दिरकी देवी पुजिन्छिन् ।
‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ : व्यंग्यलाई बारबेर !
प्रसंग १ ‘चढ्न नि हुने, जोत्न नि हुने, तर त्यसको गोबरले पोत्न नहुने, मुख नभा ’को, पुच्छरमा टाउकोमा गा ’को, त्यो के हो ?’ ‘भैंसी’‘हैन ।’
देवतालाई बचाउनै मुस्किल
‘ओहो नानी, यहाँभित्रको मूर्तिको फोटो खिच्न पाइँदैन त !’ झोलाबाट क्यामेरा निकाल्दै गरेको देखेपछि दत्तात्रय मन्दिर रेखदेख गर्ने ६० वर्षीया सावित्री पुरीले सचेत गराइन् । मन्दिरको भित्री मूर्ति नभई गर्भगृहमाथि तोरणमा राखिएका धातु मूर्तिहरूको फोटो खिच्ने भनेपछि उनले मञ्जुरी दिइन् ।
माघ २८, २०७५
‘यो कति रुपैयाँ होला ?’ फ्रेमभित्र राखिएको दुबईको कागजी नोटलाई संकेत गर्दै एक विद्यार्थीले आफ्ना साथीलाई सोधे । त्यता एक छिन नियालेपछि साथी चाहिँ जवाफिए, ‘हेर्दा गोलोगोलो छ, जिरो रुपैयाँ होला नि !’
उत्पीडन विरुद्धको आवाज
माघ २७, २०७५
चरम गरिबीको चपेटामा फसेको मान्छेले के सम्म गर्न सक्ला ? चोरी, डकैती, लुटपाटदेखि मानिसले आफ्नै छोराछोरीलाई पनि बेच्न पछि पर्दोरहेनछ ।